Thwebula Yandex.Browser 16.10.0.1326 – Android – Vessoft
Yandex.Browser – isiphequluli fast for lula web ukuphequlula. Yandex.Browser ngesivinini umthwalo page ngesikhathi uxhumano slow-inthanethi futhi kusindisa bandwidth. Isofthiwe iqukethe ibha amabhukumaka kalula izindawo ezidla ubhedu. Yandex.Browser kwenza ukuvumelanisa amabhukimakhi namanye amadivayisi usebenzisa i-akhawunti. Isofthiwe sihlanganisa ukusesha ngezwi namathiphu lapho ucwaninga. Yandex.Browser ikuvumela ukuba ukhethe injini yokusesha kanye izilungiselelo zobumfihlo.
loading Faster yamakhasi
Amazwana on Yandex.Browser:
Yandex.Browser Ahlobene software: